“”ချစ်ခြင်း နဲ့ ချစ်ခြင်းကို သိမ်းပိုက်သူ သစ်မင်း”” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » “”ချစ်ခြင်း နဲ့ ချစ်ခြင်းကို သိမ်းပိုက်သူ သစ်မင်း””
“”ချစ်ခြင်း နဲ့ ချစ်ခြင်းကို သိမ်းပိုက်သူ သစ်မင်း””
Posted by black chaw on Dec 31, 2011 in Myanmar Gazette, Opinions & Discussion | 21 comments
ကိုသစ်မင်းက ကားမောင်းသလို ဂီယာတစ်ချက်ခြင်းချိန်းပြီး ရွာကိုဝင်လာခဲ့တာပါ။
ပထမ ဂီယာမှာ အရှိန်လေးယူတဲ့အနေနဲ့ ဟာသလေးတွေနဲ့ ရွာကို ၀င်ရောက်လာတဲ့သူပါ။
ဒုတိယဂီယာမှာ အရှိန်နည်းနည်းတင်ပြီး ကဗျာလေးတွေ ရေးလာပါတယ်။
တတိယ ဂီယာကျတော့ ရသစာစုလေးတွေ ဘာသာပြန်ဝတ္ထုလေးတွေ ရေးပြီး အရှိန်နည်းနည်း ထပ်မြှင့်ပါတယ်။ ဒီလောက်မှာတင် ရွာမှာ ကိုသစ်မင်း အခိုင်အမာ နေရာတစ်ခုရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
နံပတ်လေး ဂီယာကျတော့ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး အမြင်လေးတွေ ရေးပြီး အရှိန်ထပ်မြှင့်ပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံးဂီယာကျတော့မှ ဂဇက်ဆီမီနာကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပြီး ဟိုက်စပိဒ် နဲ့ကို မောင်းနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အဲဒီတော့ ပထမ ဂီယာ ရဲ့ ဟာသပို့စ်လေးတွေနဲ့ အရင်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေဗျာ။
ဟာသလေးတွေက ရယ်ရတယ်ဗျာ။ ကောလိပ်ကျောင်းသားထံမှ မိဘများသို့ ပေးစာ ဆိုရင် တော်တော်ရယ်ရပါတယ်။ နမူနာ နည်းနည်းဖတ်ကြည့်ဗျာ။
ရှူးဖိနပ်နဲ့ ကျောင်းတက်လို့ မရပါဘူးဗျာ။ သချာင်္တွက်ချိန်ကျလို့ ဆယ်ဂဏန်းကျော်သွားရင်
ရှူးဖိနပ်ကို ချွတ်ပစ်နေရတာ အလုပ်ရှုပ်လွန်းလို့။
ပြီးတော့ မနက်ဖြန်မှာ သားတို့ကို Blood Test စစ်မယ်ဆိုလို့ ဒီည တစ်ညလုံး စာကြည့်ရဦးမယ်။ ချစ်သား စာကြွင်း ။ ။ ဒါနဲ့ အမေ၊ နောက်တစ်ပတ်မှာ
ဘရစ်နေးစပီးယားစ်အကြောင်း အရေးတကြီး လေ့လာရဦးမယ်။ အဲဒါပိုက်ဆံလိုတယ် ပို့ပေးပါဦး။
ကိုရင်စည်သူတို့၊ အီးတီတို့လို သားမျိုးတွေဖြစ်မယ်ဗျ။ အမေလုပ်တဲ့သူကလည်း သားကိုစာပြန်ပါတယ်။ အဆုံးသတ်မှာ ရေးထားတာလည်းကြည့်ဦး။
P.S : အမေ သားအတွက် ငွေ၅ထောင်-ထည့်ပို့မလို့ပဲ။
ဒါပေမယ့် စာအိတ်က ပိတ်ပြီးသွားပြီ။
တော်တော်ရယ်ရတယ်ဗျာ။ ဒီပို့စ်မှာတော့ ကိုပေါက်တို့၊ ဆရာမကြီး TTNU တို့ ထက်ဝေးတို့ နီကီတာတို့ ရဲ့ ကွန်းမန့်တွေနဲ့ အတူ ကွန်းမန့်ပေါင်း ၁၂ ခုနဲ့ ဖတ်ရမယ်ဗျာ။
မျက်မမြင် ၅ ဦးနဲ့ ကွန်ပျူတာ
ဟာသပို့စ်လေးပါပဲ။ မျက်မမြင် ၅ ဦး ကွန်ပျူတာကို တစ်ယောက်တစ်လှည့်စီ စမ်းကြပြီး ဘာနဲ့ တူတယ်ဆိုတာ ပြန်ပြောပြကြတာလေးပါ။ ဒီပို့စ်လေးလည်း တော်တော် ရယ်ရပါတယ်ဗျာ။
ဒီ ဟာသပို့စ်လေးကလည်း ရယ်ရတာပါပဲခင်ဗျာ။ အခုချက်ခြင်းပြုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နည်းနည်း ဖတ်ကြည့်ဗျာ။
ရှက်တတ်တဲ့ သူခိုးပဲ ဖြစ်ရမယ်ဗျ။ မနေတတ်မထိုင်တတ် ဖြစ်သွားပုံရတယ်။ ကျန်တာလေးတွေကလည်း ရယ်ရတယ်ဗျာ။
ကိုရင်စည်သူလိုဗေဒင်ဟောစာတမ်းလည်း ပါသေးတယ်ဗျ။ ကဲ ၂၀၁၂ အတွက် ကိုသစ်မင်းရဲ့ ဗေဒင်ဟောစာတမ်းလေး ဖတ်ကြည့်ကြဗျာ။
ကျန်းမာရေးတွင် အော်ဟစ်ညည်းညူရမည့်ရောဂါကြီးများကိုအောင်မြင်စွာလက်ခံနိုင်သည့်အခြေအနေများရှိနေသည်။ အချစ်ရေးတွင်အထာကျသည့်ချစ်သူလေးများရခါနီးကာမှအူကြောင်ကြားများနှင့်အကြောင်းပါသွားသဖြင့် အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်တတ်သည်။ ယတြာချေလိုသူများအနေဖြင့်အသုဘတစ်ခုသို့သွားပြီး အလောင်းနှင့်အတူ ၂ ရက်ခန့် ယှဉ်အိပ်နေပါ။
“ကျားဆိုမှကျား”တနင်္လာသားသမီးများသည်ယခုလအတွင်းကြောင်တောင်တောင်နိုင်ခြင်း၊ကျပ်မပြည့်ခြင်းတို့ကြောင့် ကျက်သရေမရှိဖြစ်တတ်သည်။ ခြေထောက်၊ ခါး၊ ခေါင်းစသည့်တနင်္လာနံအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ ခွဲစိတ်ခံရကိန်းရှိသည်။
ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းဖြင့်ဘာအလုပ်မှ မရနိုင်သဖြင့် ဘာမှ မလုပ်ပါနှင့်။ ချစ်သူနှင့်ချိန်းတွေစဉ်ချောင်းရိုက်ခံရတတ် သဖြင့် သတိပြုပါ။ ချက်တင်း (Chatting) ဝင်သူများချူစားခံရလတ္တံ့။ ပညာရေးတွင်ကျောင်းထုတ်ခံရခြင်း၊ စာမေးပွဲကို ခွေးကျကျခြင်းများဖြစ်တတ်သဖြင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်ကျောင်းမသွားပါနှင့်။ ဂေါ်လီရိုက်ခြင်း၊ ဂက်စ်မီးခြစ်ဂက်စ်ထည့်ခြင်း ၊ကူလီထမ်းခြင်းများကိုယခုလအတွင်းတနင်္လာသားသမီးများအတွက် ဝင်ငွေကောင်းသော လုပ်ငန်းများအဖြစ် မြင်နေရသည်။ အဆိုးများပျောက်ကင်းစေမည့် ယတြာမှာ (အင်းလျားကန်ကဲ့သို့သော) ကန်ဘောင်တစ်ခုသို့အဝတ်အစား လုံးဝမဝတ်ဘဲ သွားကာ “ကံတွေ ဟောဒီလိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် တက်လာပြီ” ဟုသက်စေ့ကြွေးကြော်ပါ။
ယခုလအတွက်အကောင်းဆုံးဇာတာရှင်များမှာ အင်္ဂါသားသမီးများပင်ဖြစ်သည်။ မကြာခဏအလှူအဖိတ်ခံရခြင်း၊ လိုင်းကားပေါ်တွင်ထိုင်စရာရတတ်ခြင်းတို့ကြောင့်အနေအစားချောင်နေနိုင်သည်။ စုတ်ပြတ်နေသည့်တိုင်အောင် “ဆရာကြီး”ဟုအထင်ခံရနိုင်သည်။ ဆွဲကြိုးချသတ်သေသည့်တိုင်ဇက်မကျိုးဘဲလှလှပပအသက်ထွက်သွားမည့် အင်္ဂါသားသမီးများဖြစ်သည်။ စစ်သားများဆီးသွားရာတွင်ဇယားကပ်နိုင်သည်။ စီးပွားရေးကောင်းနေစဉ် ညရေးညတာသွားလာရေးအဆင်ပြေစေရန်ဆင်တစ်ကောင်ဝယ်ထားသင့်သည်။ ကျန်းမာရေးတွင်မူ ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီးမဟုတ်သော်လည်း ဆေးများဆက်တိုက်ဆိုသလိုသောက်နေရတတ်သည်။ နှလုံးသားရေးရာတွင် စိတ်ဖောက်ပြန်နေသူများ၊ဇိမ်မယ်များ၊ဇီဇာကြောင်သူများ၊ညစောင့်များနှင့်စွဲစွဲမြဲမြဲချစ်သွားဖွယ်ရှိနေသည်။ ယတြာအနေဖြင့်ဇော်ဂျီအဝတ်အစားများဝတ်ပြီးဈေးဝယ်ထွက်ပါ။
ကံဇာတာမှေးမှိန်နေခြင်းမဟုတ်သည့်တိုင် တောက်ပနေခြင်းမျိုးလည်းမဟုတ်သဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အလယ်တွင်လတ်နေတတ်သည်။ ယမကာကြိုက်တတ်သူများရန်များအံ့။ လေထိုးကျွတ်ဖာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများလျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်အံ့။ လောင်းကစားကြောင့်ယောက္ခမနှင့်ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိသည်။ ဝသောသူများဝိတ်မချနိုင်ပါကဝက်နှင့်တူလတ္တံ့။ ပညာရေးတွင်ယောင်ချာချာဖြစ်နေသူများလျက်ဆားပြောင်းရောင်းသင့် သည်။ ရုပ်ဆိုးသော၊ ယုတ်မာသော၊ လော်မာသောအိမ်ထောင်ဘက်သည် သင့်အားအကျိုးပေးလတ္တံ့။ အကန်းလည်း ပေးလတ္တံ့။ ယတြာချေလိုပါကတစ်ခုသော ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ရထားလာနေချိန်၌ ရထားလမ်းပေါ် ခဏလေးလှဲအိပ်ပါ။
မူယာမာယာများတတ်သောကြာသပတေးသားသမီးများအတွက်ပြတ်ပြတ်သားသားကြိုးစားရမည့်အချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ ပြဿဒါးကိန်းထဲရောက်သဖြင့်ပြောင်ချော်ချော်လုပ်ခဲ့သမျှပြဿနာတတ်နိုင်သည်။ စီးပွားရေးတွင်ပူဖောင်းရောင်းခြင်း၊ ဖိနပ်စောင့်ခြင်း၊ ဖဲရိုက်ခြင်းများ အမြတ်များအံ့။ ကျန်းမာရေးတွင် ပန်းနာရင်ကြပ်မှသည်ပန်းညှိုးပန်းသေ မျက်စိကွယ် ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်နှင့်အသက်သေသည်အထိဖြစ်တတ်သဖြင့်ဘုရားတရားလုပ်ချိန်တန်ပြီဟုဆိုချင်သည်။ ပညာရေးတွင် ပထမရရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းအခြေအနေမပေးသဖြင့်ပန်းရံဆရာဖြစ်သွားအံ့။ နှလုံးသားရေးတွင်ချစ်ရေးဆိုလာသူကိုပဲ များပြီးပါးရိုက်မိပါကမိုက်မဲခြင်းသာဖြစ်ပြီးမည်သူကိုမဆိုမြန်မြန်လက်ခံလိုက်သင့်သည်။ ကံကောင်းစေမည့်ယတြာမှာ ပိတ်စတစ်ခုတွင် “ဘိန်းဖြူရောင်းသည်” ဟုရေးပြီး မ.ယ.က ရုံးသို့ ပျော်ပွဲစားထွက်ပါ။
သောကြာသားသမီးများကြွက်ကလေးများလို တွင်းအောင်းနေရအံ့။ အပြင်ထွက်လာသူများသည်လည်း ကြွက်ကလေးများ လို ထောင်ချောက်မိကာထောင်ကျအံ့။
အလုပ်အကိုင်အကြံအစည်များကို သိုသိုသိပ်သိပ် ကြံစည်သည့်တိုင်အောင်သောကများနေနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးတွင် သေလောက်သည့်ကံများမရှိသော်လည်းသစ်ပင်ပိခြင်း၊ ဟီးနိုးကားအတိုက်ခံရခြင်းတို့ကြောင့်ဆေးရုံဆေးခန်းရောက်ရန် ရှိသည်။ “သိပ်ချစ်မိနေပြီကလေးရယ်” ဟု ပြောလာသူရှိပါက“ရူးချင်ယောင် ဆောင်မနေနဲ့” “ရှေ့မှာ သေခြင်းရဲ့ တံခါးများ”
ဟု ပြန်ပြောရန်ဝန်မလေးပါနှင့်။ ကံတက်စေမည့် ယတြာမှာ – တစ်ခုသော သောကြာနေ့တွင်သိက္ခာရှိသူတော်ကောင်း တစ်ဦးကိုသဲနှင့်ပက်ပြီး “သိပ်တတ်နေတယ်ပေါ့လေ” ဟု သက်စေ့ရေရွတ်ပါ။
**တင့်တောင့်တင့်တယ်နေချင်သော စနေသားသမီးများ “ဒုက္ခ” ဆိုသော စကားလုံးနှင့်ရင်းနှီးပြီး တဲထိုးနေရကိန်းများရှိနေ သဖြင့်သတိရှိစေချင်သည်။နိဗ္ဗာန်ယာဉ်လုပ်ငန်းများတွင်အောင်မြင်အံ့။ ပညာရေးလိုက်စားသူများနိုင်ငံခြားမထွက်နိုင်ပါက ပြည်တွင်းတွင်ပဲနေရလတ္တံ့။ နေမကောင်းသူများနှုတ်ဆက်ချိန်ပင်မရလိုက်ဘဲ အသက်ပါသွားအံ့။ တရားဝင်လက်ထပ်ထား သည့်သူရှိနေသည့်တိုင်အောင်တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်အငယ်အနှောင်းထပ်ရရန်ရှိနေသဖြင့်အိမ်ထောင်ဘက်ကို
ကဲ ၂၀၁၂ ကိုဖြတ်သန်းဖို့ ဆရာစံဇာနည်ဘို ဟောစာတမ်းတို့ ဆရာ ကိုရင်စည်သူတို့ ရဲ့ ဟောစာတမ်းတို့ ၀ယ်နေစရာမလို တော့ပါဘူး။ ကိုသစ်မင်း က ဟောစာတမ်းရေးပေးထားပါတယ်ဗျာ။
ဒီ ပို့စ်လေးကလည်း ဟာသ ပို့စ်လေးပါပဲ ။ SEP 21 က တင်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်ပါ။ နမူနာလေးတစ်ပုဒ် ဖေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဗျာ။
ဒါလေးကလည်း ရယ်စရာ ဟာသပို့စ်လေးပါဗျာ။
Source: Reader’s Digest Best Jokes (10 July 2010~23 Sept 2011 လို့ ဖေါ်ပြထားတဲ့ ဟာသလေးတွေပါ။
Source: Reader’s DigestBest Jokes and ကြားဖူးနားဝဟာသများ လို့ ဖေါ်ပြထားတဲ့ ဟာသလေးတွေပါ။
စဉ်းစားလို့ မရတာက အပေါ်က နံပတ် ၆ ပို့စ်မှာ လည်း လက်မ အောက်စိုက်သူတွေ့တာနဲ့ ဒီပို့စ်မှာလည်း လက်မ၃ ချောင်းတိတိ အောက်စိုက်ထားတာပါ။ ဟာသလေးတွေက အပြစ်ကင်းပါတယ်။ ဘာကို ရည်ရွယ်ပြီးအောက်စိုက်ကြသလဲ ဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေ စဉ်းစားရခက်ပါတယ်ဗျာ။
ဒါလည်း ဟာသ ကာတွန်းပုံလေးတွေပါဗျာ။
ကိုသစ်မင်းရဲ့ ဟာသလေးတွေ လက်လှမ်းမီသလောက် ပြန်ရှာပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ ကိုသစ်မင်းက အစပိုင်းမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသလေးတွေရေးပြီး ၀င်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ပြီးမှ ကဗျာလေးတွေ ရေးလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကိုသစ်မင်း ကဗျာတွေက ကာရန်ကဗျာလေးတွေ များပါတယ်။ မော်ဒန်အတွေးအရေးလေးတွေကိုလည်း တစ်ခါတစ်ရံ ရေးဖွဲ့တတ်တာတွေ့ရပါတယ်။ အလင်းဆက်စကား ငှား ပြောရရင် စနစ်တွေ..ဘောင်တွေ..ထဲ မှာ အံဝင်ခွင်ကျ..လှပနေတဲ့ ကဗျာလေးတွေ များပါတယ်ဗျာ။
စ , လယ် , ဆုံး
ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးနဲ့ စလိုက်ရအောင်ပါ။ SEP 20 က တင်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်ပါ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
အို…. ဗျ ကျနော်သစ်မင်းရဲ့ကဗျာ…………..က
ကိုပေါက်ရဲ့ ကဗျာကွန်းမန့်လေးနဲ့ ဖတ်ကြရမယ့် ပို့စ်လေးပါဗျာ။
ကိုသစ်မင်းကို ဂဇက်မှာ အားလုံးအသိအမှတ်ပြုခဲ့ရတာကတော့ မှတ် ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ Oct2က တင်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ဒီကဗျာလေးဟာ ဒီဘက်ခေတ် ရွာရဲ့ စည်းလုံးညီညွှတ်မှုကို အစပြုစေခဲ့တာမို့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဆိုတာထက် ပိုတန်ဘိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုသစ်မင်း ကို လက်တွဲခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ ရွာရဲ့ မရှိမဖြစ် ကြောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကဗျာလေးရယ် ကွန်းမန့်လေးတွေရယ်ကိုတော့ ရှည်လျားကောင်းရှည်လျားမယ် ဖြစ်ပေမယ့် နှစ်သစ်ကူး အထိန်းအမှတ်အနေနဲ့ ဖေါ်ပြပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီအထိက ကိုသစ်မင်းရေးတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ကြောင်ကြီးက ကွန်းမန့်မှာ ကဗျာဆက်ရေးပါတယ်။ တစ်ပုဒ်တည်းလို့ သတ်မှတ်ပြီးသာ ဖတ်ကြပါဗျာ။
ကျန်သူတွေ အများကြီး ရှိတယ်ဗျာ။ အရည်မရ အဖတ်မရမိုလို့ တွေ့မိသမျှ စပ်လိုက်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။
ကြောင်ကြီးပြီးတော့ ကြောင်လေးက ဆက်ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဘီလူးကြီးကလည်း ကဗျာတိုလေး တစ်ပိုဒ် ဆက်ရေးပါတယ်။
မောင်ကြောင် ပြောမှ ငါဘ၀
ဆရာမကြီး TTNU ကလည်း ကဗျာဆက်စပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ငါမသိတယ်မို့၊
ကြောင်အော်သံ ဆူညံလှတာ နဲ့၊
“ဘယ်သူလဲဟဲ့” လို့ အခါခါ ငါအော်ကာ မေးပေမဲ့
အရေးလုပ်စွာ ဘယ်သူမှ အဖြေ မပေးလေသမို့၊
” ဘဒူလဲ “…” ဘဒူလဲ “… အသံတုန် အသံပျက်ကို
CAT.. စီအေတီ ..ကက်… ရွှေနားတော်ထက်မှာ ” လဒူ” ….လို့ များ နားကြားမှားရော့သလား။
ငါ တို့များမှာ ဖြင့် နင်တို့ ရွာ လာချင်လွန်းလို့ပါ့ ၊
နင်တို့ရွာသားတွေကို လည်း လေးစားလွန်းလို့ပါ့၊
မခေါ်ရက်ပါ (လဒူ) ရယ်လို့
အမူရယ် မပိုကြပါနဲ့တော့ အို.. ကွဲ့… ရွှေလဒူ။
ကိုသစ်မင်း က ကဗျာကို ဆက်ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုရင်စည်သူ က ကဗျာကို ဆက်စပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အဲ့ဒါ ကြောင်ကြီး… မှတ်…။
ပြန်အရေး… အဲ့ဒါ ကြောင်လေး… မှတ်။
အဲ့ဒါ မောင်ပေ… မှတ်…။
အဲ့ဒါ အီးတုံး… မှတ်…။
အဲ့ဒါ မမ… မှတ်..။
အဲ့ဒါ ငှက်ကြီး… ကိုရင်.. မှတ်…
(ခင်လုိ့ နောက်ပြီးရေးတာနော်.. စိတ်ဆိုးရဘူး… )
ပေါက်ဖေါ်ကလည်း ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ ဆက်ပြန်ပါတယ်။
မျက်ခြေမပြတ် ပို့ စ်အကုန်ဖတ်
ကြောင်ကြီး ဟုသာ မှတ်
ရေဒုက္ခကူ တို့ ရွာသူ..
(ကိုကြောင်ကြီး စပွန်ဆာကိုမေ့ခဲ့တယ်နော့ )
ကိုကြောင်ကြီး အားကျလို့ အပေါ်ကမန့် တဲ့လူတွေ ထည့်လိုက်ဒါ။
မပဒုမ္မာကလည်း ကဗျာလေးနဲ့ ၀င်ရေးပြန်ပါတယ်။
ကြောင်ကြီးက ကိုသစ်မင်းရဲ့ သဘောထားကြီးမှုကို လေးစားကြောင်းပြောပြီး ကဗျာကို ဆက်ပြန်ပါတယ်။
ကိုသစ်မင်းရဲ့ စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝမှု လူကြီးပီသမှုများအတွက် နောင်များကြုံခဲ့ရင်
Gentleman ကလပ်တခုမှာ လိုက်လံပြုစုပါ့မယ်။ ကျနော့်ကိုလည်း ဂျပန်လာဖြစ်ခဲ့ရင်
ကိုသစ်မင်း က မောင်ဘလှိုင်အတွက် ကဗျာလေးတစ်ပိုဒ် စပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုပေါက် ကလည်း ကဗျာ ဆက်ရေးပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အစ မတော် ပြန်ကာဆော်
Megaforce ကလည်း ကဗျာ စပ်ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
သူကြီး ပေးတဲ့ ပါးစပ်ပေါက်လေး
ရေးသားတဲ့ စာ ကြိုက်တဲ့ခါ
ကျွန်တော်တို့ သူကြီးကလည်း အားကျမခံ လေးလုံးစပ်ကလေးနဲ့ ၀င်မန့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အပိတ်မှာတော့ ကိုသစ်မင်း က ကဗျာလေးနဲ့ ပဲ ပိတ်ပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။
အနူ ယင် အုံသည့်အလား။
ကိုသစ်မင်းအပေါ် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ချစ်ခြင်းဟာ ဒီကဗျာလေးနဲ့ စတင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ချစ်ခင်ပြီးဖြစ်တဲ့ ကိုကြောင်ကြီးအပေါ် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ချစ်ခြင်းဟာလည်း ပို လေးနက်စေခဲ့ပါတယ်ဗျာ။
ဒါကြောင့် မှတ် ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးဟာ ဘောလုံးစကားနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုသစ်မင်းကြောင့်ရတဲ့ ပင်နယ်တီကို ကိုကြောင်ကြီးက ဂိုးသွင်းသွားတာလို့ပဲ တင်စားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မူရင်းလင့်မှာ သွားဖတ်ကြပါခင်ဗျာ။
လူ, မြစ် ,သစ်ပင်
ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကိုတော့ Oct 13 က တင်ခဲ့တာပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပါဗျာ။ တစ်ခါတည်း ဖတ်လို့ရအောင် စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ပြောချင်တာလေးကို ပြောပြသွားနိုင်တဲ့ ကဗျာကောင်းလေး တစ်ပုဒ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ယူဆတာပါပဲ ခင်ဗျာ။ ကဗျာဆရာ ကိုနေ၀န်းနီ ရော ဘယ်လိုမှတ်ချက် ပေးမလဲ သိချင်မိပါတယ်။
” ရှက် “
ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကလည်း ကိုသစ်မင်းရဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ Oct 19 နေ့စွဲနဲ့ တင်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ။
အတ္တပန်းချီ ငါ ဆေးစီခဲ့
ကွန်းမန့် ၁၉ ခုပါ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် ဒီကဗျာလေးရဲ့ အောင်မြင်မှုကို တွေ့ရမှာပါဗျာ။ ပြန်ဖတ်ကြည့်စေ ချင်ပါတယ်။
ကတော့ ကာရန် ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ ကဗျာ ချစ်သူတွေ ခံစားနိုင်ဘို့ပါ။ ကွန်းမန့်ပေးထားသူများထဲက ကျွန်တော် ဘလက်ချောရဲ့ ကဗျာကွန်းမန့်လေးကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပြန်ခိုက်နေမိသောကြောင့် ပြန်ရေးပြပါသည်။
(မှတ်ချက် – ကိုပေ့ လေသံဖြင့်)
ကိုသစ်မင်းနှင့်အလင်းဆက်တို့၏ အပြန်အလှန်ကွန်းမန့်လေးများက ပို့စ်လှလှလေးတစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
လင့်လေးပေး ထားပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
ကတော့ မော်ဒန်ဆန်တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါဗျာ။ မော်ဒန်ကဗျာတွေကို ကိုသစ်မင်း ရေးလေ့မရှိဘူးလို့ ကျွန်တော် သိထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရွာထဲက မော်ဒန်ကဗျာဆရာတွေဖတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ရေးပေးလိုက်ပြန် တော့လည်း ညွန့်နေပြန်တာပါပဲ ခင်ဗျာ။ ကဲ ဖတ်ကြည့်ဗျာ။
ညီမျှသလို မညီမျှသလို ညီမျှချင်းကိစ္စတွေကို
ကိုဆန်နီ ရဲ့ ပီတိဖြစ်စရာ ကွန်းမန့်လေးကိုလည်း ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆက်၍ ဆက်၍ ရေးစေချင်ပါသည် အာရုံရသ၍ပေါ့။ အကြိုက်ဆုံး အပိုင်းလေးကို English လိုပြန်ရင်းနဲ့ ဂုဏ်ပြုလုိက်ပါတယ်။ ဒီအပိုင်းလေးက လောကသံသရာရဲ့မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ ဒုက္ခတွေကိုဖော်ကြူးတယ်လိုထင်ပါတယ်။
On forthcoming repeated tomorrows
Reaching the seven peaks of mountain ranges
Withagrip to the strand of Horse’s tail
To settle the debt of vicious circle of stay….
မှားသွားရင် ကဗျာအလှပျက်သွားရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်နော်
ကွန်းမန့် ၁၇ ခုနဲ့ ဖတ်ရမယ့် ကဗျာလေးပါဗျာ။
ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကိုတော့ NOV 8 နေ့စွဲနဲ့ တင်ခဲ့တာပါဗျာ။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
ဇာတ်ထဲက “ကားဆွဲ” လို၊
ဒီပို့စ်မှာတော့ Etone နဲ့ AKKO တို့ရဲ့ ကဗျာကွန်းမန့်လေးတွေကို အမှတ်တရ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
သြော် …. ငါ့ကံ ငါ့ကံ
၀င်တွယ်ပါ (ထမင်းဆိုင်ရွေးမနေနဲ့ ကြုံတဲ့ဆိုင်ဝင်စားလို့ ပြောတာပါ )
ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကလည်း ကိုသစ်မင်းရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
အလှအပအသွင် ပုံနဲ့ ဟာတွေ မှတ်ချင်လား
တသသ ရင်ခုန်မဲ့ ကဗျာတွေစပ်ချင်လား
ဟင်….ရသအမြင် စုံတဲ့ စာတွေ ဖတ်ချင်လား။
ငရုတ်သီး ထောင်းကို စားချင်လား
ဂျုပ်ကြီး အကြောင်းကို ပွါးချင်လား
ဟင် …တရုတ်ကြီးအကြောင်းကို ကြားချင်လား
ငွေ နဲ့ ပါတ်ပြီး အမောင် “တင်း”နေလား
ရေနဲ့ စပ်ပြီး ပလောင်ထင်း နေလား
ဟင် ….ဂေဇက်ဖတ်ပြီး အမှောင်ခွင်းနေလား…
မဖောဘဲအဆုံးကြီး ရစ်ကာ အပိုတွေ ပွါး
မပြောဘဲ ငုံးပြီး မျက်နှာ မချိုလေလား
ဟင်…..ဘောပွဲရှုံးပြီး ညစ်တာ အကိုတွေလား…
ပိုင်လို့ ကြွားမလို့ လာတာလား
စတိုင်မို့ စတားဖို့ လာတာလား
ညာဏ်တွဲ အမှန်ဆွဲ သွေဖက်ထား
အကြံမနဲ အပြန်ဟဲ မွှေချက်များ
ဟင်….သံတွဲ ရန်ပွဲ တွေထွက်သွား…
ကြွရွ ဖြာဖြာ ဝေလျှက်ပွါး
မမြင်ကြလဲ ပွါးဖြစ်တာနဲ့ ခင်ကြလား
အသွင်မပြဘဲ များမေတ္တာဖွဲ့ ရင်မှထား
ဟင်…မထင်ရဘဲ တအားချစ်တာလဲ မြင်ရသား။
ဒီကဗျာလေးမှာတော့ ကွန်းမန့် ၁၇ နှစ်ခုရှိခဲ့ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ကဗျာကွန်းမန့်လေးကို ဖေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဗျာ။
ကိုသစ်စပ်သော ကဗျာ “ဟင်”…
ဆိုတာလေးကတော့ သိတ်မကြာခင် အချိန်က လိုအပ်လို့ ရေးလိုက်ရတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါဗျာ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
စည်းကမ်းမဲ့ ရွာသားတစ်ချို့ကို သတိပေးထားတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါဗျာ။ ကွန်းမန့်လေးတွေကိုတော့ မူရင်းပို့စ်မှာပဲ ဖတ်ကြပါတော့ နော။
ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးအကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ ကဗျာလေးက အရှည်ကြီးလည်းမဟုတ်တာကြောင့် တစ်ခါတည်း အတူတူ ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပါ။
ဖော်မြူလာကို တော့ ဘယ် ခေတ်မှာမှကို
မတည်ထွင်နိုင်တာကလဲ “လေ” စရာဘဲတဲ့ ….။
ပွင့်လင်းပြီးအရိုင်းဆန်တဲ့ မုန်တိုင်းတွေ ရယ်
ငါမတားခဲ့နိုင်တာတော့ ဝန်ခံတယ် ……………… ။
တေးသံမြှားတွေ အဆက်မပြတ်ပစ်တတ်တဲ့ ငှက်ငယ်တွေကြားမှာ
စမ်းရေသောက်ရတဲ့ နေ့တွေကိုလဲ ဘဝင်မမြင့်ဘဲ မင်းဖြတ်မောင်းသွားပါ …………။
အကွေ့အကောက် ချောက်ကမ်းပါးတွေက တောင်ပြိုနေ့ကံကြမ္မာဆိုးတွေနဲ့
ပစ်တင်ရှုံ့ချစကား ဆူနာမ်ီလှိုင်းထန် ကမ်းခြေမှာကယ်နိုင်သူဝေးတဲ့ညတွေမှာလဲ
မင်း ဖီးနစ် ဖြစ်နေပါစေ………………….။
ဖွင့်တာလဲ မရှိ ပိတ်ထားတာလဲ မရှိ ဘူး မဟုတ်လား…….။
ဒီနေ့လဲ “နေလုံး” ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ မှာ
ငါ့အတွေး အိမ်လေးအတွက် အိမ်ငှါးအလိုရှိသည်ဆိုပါလား………
ကဗျာတစ်ပုဒ် ကောင်းပြီဆိုရင်ဘယ်အမျိးအစားထဲမှာပါတဲ့ ကဗျာလို့ ခေါင်းစဉ်တတ်ဖို့လိုပါသလား။ ကျွန်တော် မသိပါ။ ရင်ထဲရောက်သော ကဗျာတစ်ပုဒ်ဟု သာပြောချင်မိပါသည်။ ကွန်းမန့်လေးတွေဘက်လှည့်ရအောင်ပါ။
သူကြီးက ကွန်းမန့်ရေးရင်း လေဒီခိုင် ကို ပွဲထုတ်ပါတယ်။
ဒီလိုရေးနည်းတွေကို.. လေဒီခိုင်ကတော့ ကြိုက်တယ်..။
ကြိုက်ဆို.. သူလည်းအဲလိုတွေရေးတာပဲ..။ ကျုပ်ကတော့..
ခံစားပြီး (ဆရာသစ်နဲ့အတူ) ကဗျာကားမောင်းချင်မိပါရဲ့
မဆုံးတဲ့ရက်ကို စွန့်ထွက်ရယုံတင်ပါ..။ ။
ဒီပို့စ်မှာ ကျွန်တော် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ရုံနဲ့တင် ကိုသစ်မင်း ဟာ ကဗျာသမားတစ်ယောက် ဆိုတာ သေချာပေါက်ပြောနိုင်နေပါပြီ။ ကိုသစ်မင်းက ရွာထဲကို ၀င်လာတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသလေးတွေရေးပြီး ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ကဗျာလေးတွေရေးပြီး ကဗျာနဲ့ပဲ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ရရှိလာခဲ့တာပါ။ ပြီးမှ စကားပြေအရေးအဖွဲ့လေးတွေ နဲ့ ဂျပန်ဝတ္ထုတိုလေးတွေ ဘာသာပြန်တဲ့ ဘက်ကို လှည့်လာပြန်ပါတယ်။
ကိုသစ် ကို ချစ်ခင်ကြသော ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ လက်ဆောင်လေးတစ်ခုပါ။
ဒီရက်ပိုင်း ကျွန်တော် နည်းနည်း နေမကောင်းတာနဲ့
လင့်တွေပြန်ရှာရတာလည်း တော်တော် ခက်နေတာနဲ့
နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ရတာပါ။ ကျွန်တော်က တစ်ပုဒ်တည်းနဲ့ အစုံအလင်ပါချင်ပေမယ့်
မတတ်သာလွန်းလို့ ခွဲလိုက်ရတာကိုတော့ နားလည်ပေးပါဗျာ။
အပိုင်း ၂ ကတော့ မနက်ဖြန်လောက်ဆို အိုကေမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။
၂၀၁၂ နှစ်သစ်မှာ ကိုသစ်မင်းတစ်ယောက်
စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာ ပါစေဗျာ။
ကျွန်တော့် ဆရာ ပေါက်ဖေါ်ကြီးကို
မသိတာလေးတွေ သင်ပြပေးတဲ့ အတွက်ပါ ပေါက်ဖေါ်ကြီးရေ။
ဦးကြောင်ကဗျာက အရမ်းကြိုက်တယ် အဲ့လို ရေးတတ်ချင်တာ ဘယ်လိုမှ စကားလုံးတွေ ထွက်မလာလို့ …… ရသလောက်လေး ရေးကြည့်မယ်….
အမြင်တွေ သစ်တဲ့ ကိုသစ်…….
ကဗျာတွေ ဟစ်တဲ့ ကိုသစ်……..
ကောင်းစေ ချင်တဲ့ ကိုသစ်……….
MG ကို ချစ်တဲ့ ကိုသစ်………..
စေတနာတွေ ပျစ်တဲ့ ကိုသစ် ……..
အားလုံး ချစ်တဲ့ ကိုသစ်……….
ကိုဘလက်က ကိုသစ်မင်းကို ဒီပို့စ်မှာ
ညွှန်းရင်းနဲ့ ကိုသစ်က ဂေဇက်ရွာက
ကိုသစ်မင်း ပို့စ်တွေက ရွာသူား ရှေ့တန်း ဘက်တန်း
ဂိုးသမား အားလုံးကို ချိတ်ပေးနေတယ်ဆိုတာ
ကိုပေါက်ဆိုတာနဲ့ ခင်ဗျားရေးတဲ့လမ်းဘေးက ထမင်းဆိုင်ကိုဘဲသိတယ်
ကွန်နက်ရှင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ ဖတ်ရတာကတော့ ဒီကိုသစ်မင်းပိုစ့်တစ်ခုတည်းနဲ့တင် တန်သွားပါပြီ ကွန်နက်ရှင်….
အကိုသစ်ပို့ စ်လေးနဲ့နယူးရီးယားကို ဖြတ်သန်းလိုက်ပါတယ်
ပြည်အကျိုးရွာအကျိုး.ကမ္ဘာအကျိုး ဆထက်တန်ဘိုး တိုးပြီး သယ်ပိုးနိုင်တဲ့ အန်ဂယ်ကြီး ဖြစ်ပါစေကြောင်း
ရွာစားကျော် ငပေါက်ဖော်မှ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်
၂ ပိုင်းခွဲတင်တော့ ၂ခါလိုက်မန့်ရမှာပေါ့နော်. ပျော်ထှာ
ရေးတဲ့ စာတင်မက ပြန်ပေးလေ့ရှိတဲ့
ကွန်မန့်ကပါ တဖက်သူကို ပျော်ရွင်စေသူ
၂ရက်ရှိပြီဗျ …ကိုသစ်ပျောက်နေတာ ..
နှစ်သစ်မှာ …ပျာ်ရွှင်ပါစေ ကိုသစ်ရေ ..
ဂဇက်ရွာက ခင်တဲ့ ဆရာသစ်
ကျွန်တော် လေးစား အားကျတဲ့ ကိုသစ်မင်း ရဲ့ အကြောင်း ကိုသစ်မင်း တင်တဲ့ ပို့ စ်တွေ အကြောင်း အများကြီး သိလိုက်ရပါတယ် ။
အခုလို စုစည်း ဖော်ပြပေးလို့ကျေးဇူးပါပဲ..ဗျ။
ကိုဘလက်ရေ..နောက်ထပ် လည်း တခြားဆ၇ာတွေ အကြောင်း..စုစည်းဖော်ပြပေးစေချင်ပါတယ် ။
ကျေးဇူးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ကျနော် ဆရာဦးခိုင်ကိုအစပြီပြုပြီးသတိရမိပါတယ်။
“ငါလုပ်တာကွ” ဟုမာန်တက်ပြောကြားလေ့မရှိသော ပြည့်ဝသော
ရွာ၏ ဆယ်လီဘရစ်တီဟုဆိုအပ်သော ကိုကြောင် ၊ မမ၊ မဝေဝေ၊မမှီ ၊
ကိုပေါက်(မန်း) မပူးခ်ျ၊ဒေါက်တာပဒုမ္မာတို့၏ အစကနဦးတွဲခေါ်ခဲ့မှု
များမှာကား ကျနော့တသက်မမေ့စရာ “သူတို့၏ မုဒိတာ” ကျေးဇူးဖြစ်ပါသည်။
နောက်ထပ်မံ၍ သစ်မင်း ဟု လူသိများထင်ရှားလာခြင်းကို ဖန်တီးခဲ့သူမှာ
ဖြစ်ပါကြောင်း ဤနေရာတွင် မှတ်တမ်းတင်ပါရစေ။
ထင်ရှားလာသော သစ်မင်း ကို မကြာခဏအရောင်တင် တောက်ပစေသူကတော့
အားလုံးသော ကျနော်စာများကိုကော်မန့်ပေးသူများကိုလည်း မှတ်တမ်းပြုအပ်ပါသည်။
ကျနော်တင်မက ခင်ဗျားရဲ့ လူတိုင်းအပေါ်မှာ လူသားတို့ရဲ့ ထားရှိအပ်သော
စေတနာ ဂရုဏာ “မုဒိတာ”စိတ်များကို ကျနော် လေးစားစွာ ချီးကျူးပါတယ်။
ကျနော်တို့မလုပ်နိုင်သော အများအကျိုးပြု တံခါးစောင့်ပို့စ်ဆိုတာ အားလုံးကို
ခင်ဗျားပေးတဲ့ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်လို့ အများရဲ့ ပြန်လှန်ချစ်ခင်မှုတွေနဲ့အတူ
ကိုဘလက်ချောနှင့်တကွ မိသားစုဝင်အားလုံး ၂၀၁၂ ဟာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ
နှလုံးသားလှတဲ့ မုဒိတာပြည့်တဲ့ ကိုဘလက်ချော အေးချမ်းသာယာရှိပါစေခင်ဗျာ
ဆရာသစ်ရဲ့ ဒီဇိုင်းအဓိပါယ်လေးကဘာများလည်းဗျ။ (^^) ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲသိချင်လို့ပါ။
ဂုဏ်ပြုထိုက်သူကို ဂုဏ်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီ အပီအပြင်တူးဆွနေတဲ့ ကိုဘလက်ကြီးလည်း နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ခညောင်းပါစေလို့ …
ကွန်မန့်မှာ အမှတ်တရ ထည့်ရေးလိုက်လို့ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ဆြာသစ်ကို ရွာထဲမှာ ကွန်မန့်တွေ ပေးနေကတည်းက သတိထားမိပေမယ့် “မှတ်” ကဗျာကတော့ ပေါက်သွားတဲ့ အမှတ်တရပေ့ါ။
ဂီဂီ့ကို “ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဇာဂီ” ဆိုပြီး ဆြာဘလက် တူးဆွတုန်းက “စွယ်စုံရ မင်းသားလေးပေ့ါ” လို့ မန့်ခဲ့တယ်။
စွယ်စုံရ မင်းသားကြီး မကြာမီ လာမည်ဆိုတာကို သိထားလို့ ….
ဆရာသစ်ရဲ့စာတွေ ကောင်းလွန်းလို့ ကျွန်မမှာ အိမ်ကလူကြီးကို အမြဲညွှန်းရတာ အမှတ်တရပဲ။ သူက အလုပ်မအားတော့ စာတွေကို ရွေးဖတ်တဲ့သူလေ။ ကျွန်မကတော့ အားလပ်ချိန်များသူမို့ မြင်မြင်ရာစာ အကုန်ဖတ်တာ နားလည်တာရော နားမလည်တာပါ ဖတ်တာ။ အဲ့တာကြောင့် ကျွန်မက သူ့ကို အမြဲသတင်းပေးရတယ် ဒီနေ့ ကိုသစ်မင်း ပို့စ် အသစ်တက်တယ်လို့။ တချို့စာတွေဆို အမှန်ဝန်ခံရရင် ကျွန်မ သိပ်နားမလည်ဘူး သူကတော့ ဖတ်ပြီး သဘောတွေကျလို့။
နှစ်သစ်မှာမန်ဘာဝင်တွေအားလုံး ဘ၀နှင်.ဆန္ဒ တစ်ထပ်တည်းကျနိူင်ပါစေ။
ဆရာသစ် ရဲ့ ကျွန်မ အရင်က မဖတ်ဘူးခဲ့တဲ့ Post တွေကို စုစည်းပေးလို့ ကျေးဂျူးကမ္ဘာ ပါ ကိုဘလက်ရေ။
နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းပါစေ။ :-)
အမည် မဲသော်လည်း အသည်းကရွှေပါ။
သစ်လွင်နေမယ့် ချစ်ခြင်းများနဲ့ လောကကြီးကို အလှဆင်နေသော
အသစ်အသစ်တို့ရဲ့ ရာဇာမင်းပါဘဲ။(အတွေးအခေါ်သစ်တွေကို ပြောချင်ပါတယ်)
နှစ်သစ်မှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် ခန္ဓာ့ဝန် လောက၀န်ကို ထမ်းနိုင်ကြပါစေ။